Drag and Drop မ၇လို့ — MYSTERY ZILLION
Drag and Drop မ၇လို့
July 2011 edited July 2011 in Windows 7
ကျွန်တော် windows7မှာ files တွေကို Drag and Drop လုပ်လို့ မ၇လို့ပါ။ Desktop ပေါ်က icons တွေကိုလဲ Drag and Drop လုပ်တာမ၇ဘူး။ ဘာမှကို Drag and Drop လုပ်လို့မ၇တော့တာ။ ကူညီကြပါအုံး။
Mouse problem ? Is your mouse working fine ? Is there any error message ? Are you using touchpad from laptop ?
ကိုစေတန် ​ပြောသလို Mouse Error ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ Mouse မကောင်းတာမဟုတ်ရင် Driver တစ်ချက်လောက် ပြန်မောင်းလိုက်ပါလား။ မောင်လေးတစ်​ယောက်စက်မှာ အဲဒီလို ကြုံဖူးတယ်။ သူ့စက်က Laptop Touchpad ကနေဆိုမရဘူး။ External Mouse တပ်သုံးရင်တော့ အဆင်​ပြေတယ်။ Driver ပြန်မောင်းလိုက်တော့ သုံးလို့ရသွားတယ်ဗျ။
ကျွန်တော်က laptop မှာ external mouse တပ်သုံးတာ။ mouse ကကောင်းပါတယ်။ touchpad လဲကောင်းတယ်။ သူက ကျန်တာတွေ အကုန်လုပ်လို့၇တယ်။ double-click လဲ၇တယ်။ အဲ့ Drag and Drop လေးပဲ ပြဿနာတက်နေတယ်။ ဘာကိုမှ ထိပြီး ရွေ့လိုကိုမ၇ဘူး။
mouse မပျက်ဘူးဆိုရင် mouse properties ထဲက double click speed လေးနဲနဲလျော့ကြည့်ပါဦး။
notification icon area မှာ touchpad ပုံနဲ့icon မှာ click or right click လုပ်ပြီးsetting ပြန်ပြင်ကြည့်ရင်ရပါတယ် ။
ဟုတ်ကဲ့။ ၇သွားပါပြီ။ windows ကို repair ပြန်လုပ်လိုက်တာ။ သူက system ကဖြစ်နေတာ။ Hardware က မဟုတ်ဘူး။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်လျက်။ ကော်ဖီလဲ အားလုံးကို တိုက်လိုက်ပါတယ်။ ~O)